Fikirakirana voka-pifidianana: lavin’ny Ceni ny fidiran’ny kandidà amin’ny “logiciel” | NewsMada
Fikirakirana voka-pifidianana: lavin’ny Ceni ny fidiran’ny kandidà amin’ny “logiciel”
Mbola mahabe adihevitra ny amin’ny “logiciel” ampiasain’ny Ceni amin’ny fikirakirana fifidianana. Nilaza ny Ceni fa tsy azon’ny kandidà idirana izany…
Tsy misy lalàna manery ny Ceni tsy maintsy mampiseho izay vokatra informatika amin’ny kandidà na ny solontenany. Anisan’ny nambaran’ny eo anivon’ny Ceni, notarihin’ny filohany, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, omaly, io ny amin’ny fikirakirana voka-pifidianana, fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra.
Noho izany, tsy afa-miditra amin’izay rindram-baiko na ny “logiciel” ikirakiran’ny Ceni ny voka-pifidianana, eo anivon’ny sampana informatika (DSI), ny kandidà na ny solontenany. Ahina hanembantsembana na hitera-doza amin’ny fahamarinan’ny voka-pifidianana ny fitsabahana amin’ny “logiciel” fikirakirana ny voka-pifidianana.
Na izany aza, mahazo mitondra ny rindram-baikon’ny kandidà hahazoany manara-maso sy manamarina ny voka-pifidianana avoakan’ny Ceni izy ireo.
Azo atao ny manao fampitahana voka-pifidianana
Homena dika mitovy amin’izay voka-pifidianana avy any amin’ny SMRV àry ireo kandidà roa tonta amin’izay fahazoana manara-maso sy manamarina voka-pifidianana izay. Mahazo mampiditra izany amin’ny “logiciel” azy manokana izy ireo amin’izany.
Samy mampiditra ny voka-pifidianany amin’izay ”logiciel” ampiasainy avy izany ny Ceni sy ireo kandidà. Rehefa vita sy mivoaka izany, afa-manao fampitahana ny voka-pifidianana avoakan’ny Ceni amin’izay azy eo an-tanany ny kandidà tsirairay avy. Ambaran’ny Ceni fa efa misy ny fahazoana manao fampitahana sy ny fangaraharana amin’ny voka-pifidianana amin’izany.
Hanomboka ny propagandy… Hambara ny 31 desambra ny voka-pifidianana
Miantso ny manampahaizana momba ny informatika avy amin’ny kandidà tsirairay avy hiatrika ny fihodinana faharoa àry ny Ceni. Eo koa ny manampahaizana avy amin’ny fiombonambe iraisam-pirenena, manara-maso ny fifidianana eto Madagasikara; ary ny avy amin’ny firaisamonina sivily mpanara-maso fifidianana.
Ankoatra izany, hanomboka ny talata 4 desambra izao ny propagandy. Haharitra 15 andro izany ka hifarana ny 17 novambra, misasakalina. Hambara ny 31 desambra, faran’ny taona kosa ny voka-pifidianana tsy ofisialy avy amin’ny Ceni.